Wiil yar Oo Aabihiis Iyo Xaas Uu Qabay ay Dileen Oo Argagax ka Abuuray Ingiriiska AwdalMedia Awdal Media Wiil yar Oo Aabihiis Iyo Xaas Uu Qabay ay Dileen Oo Argagax ka Abuuray Ingiriiska
Wiil yar Oo Aabihiis Iyo Xaas Uu Qabay ay Dileen Oo Argagax ka Abuuray Ingiriiska
Aabbe iyo xaaskiisa ayaa lagu heley dambi ah in ay dileen wiil lix sano ah oo lagu magacaabo Arthur Labinjo-Hughes, kaas oo ninka uu ka dhalay xaas kale.
Wiilkan yar oo la dilay sanadkii hore ayay hadda maxkamadda ogaatay caddeymo argagax leh oo muujinaya sidii wiilka loola dhaqmay iyo ciqaabtii xadka ka baxsaday ee la mariyay.
Thomas Hughes iyo xaaskiis Emma ayaa sidoo kale lagu heley dambi ah dayacaad carruur.
Islaanta wiilka aayada u ah ee Emma ayaa si gaar ah loogu heley inay wiilka dishay, iyada oo madaxa ugu garaacday ismiidka.
Caddeymihii maxkamadda lasoo bandhigay waxaa ka mid ahaa in wiilka la qadin jirey oo cunada laga reeban jiray, in la siiyay cunto sumaysan oo markii dambe uu u dhiman doono, iyada oo sidoo kale guriga qeybo ka mid ah lagu go’doomin jiray.
Wiilkan yar ayaa waxa mararka qaar lagu ciqaabi jirey in uu saacado illinka taagnaado sidii in uu yahay sanam oo kale, waxa xitaa dhacday in mar laga jeexjeexay funaanado koox uu taageero oo ah kooxda Birmingham City.
Maxkamadda ayaa la daawadsiiyay muuqaalo kaamirooyinka aan libiqsan ay duubeen iyo waliba codad wiilka laga duubay oo uu leeyahay ‘cidna ima jecla aniga’ , weedhaas oo uu ku celinayo afar mar.
Waxaa kale oo la dhagaystay cod wiilka uu u duubay qofka qaabilsan daryeelka carruurta ee dowladda oo uu ku leeyahay “cunto la ima siinayo”, weedhaas oo uu ku celcelinayo 7 jeer.
Islaanta aayada ah ayaa la sheegay markii uu wiilka miyir daboolmay, in ay wacday qeybta gargaarka degdega ah 12 daqiiqo kadib, iyada oo u sheegtay been ah in wiilka uu meel kasoo dhacay.
Inkasta oo aabaha uu goobjoog ahayn markii la dilayay wiilkiisa, waxa ay maxkamadda ku heshay in uu wax ka ogaa qorshaha, isaga oo dhawr jeer wiilka ugu hanjabay in uu ciidda ka hoos marinayo, isaga oo sidoo kale mar farriin uu u direy xaaskiisa ku yiri “Naga soo afjar cunugan”.
Dhacdadan ayaa argagax galisay guud ahaan shacabka Ingiriiska, iyada oo noqotay arrinta loogu hadal hayn badanyahay, iyadoo dhanka kale farta lagu godayaa hay’adahii dowladda ee u xilsaarnaa daryeelka bulshada oo la sheegay in ay shaqadooda ka gaabiyeen, xili wiilka Arthur jirkiisa laga heley 130 dhaawac oo kala duwan.
Wiilka ayaydiis ayaa lammaanahan ku tilmaamtay kuwa arxan daran oo wiilka si xun u galay.
“Madaxwayne Salaadiinta Iyo Wasiirada Kala Goro”.Caaqil ka Hadlay Khilaafka Biixi Iyo Suldaankiisa.
Qoor Qoor Oo Saxiixay Miisaaniyada Dowlad Goboleedka Galmudug.